Jean Seri oo markii ugu horaysay ka hadlay heshiiskii burburay ee uu ugu biiri rabay Barcelona – Gool FM
Jean Seri oo markii ugu horaysay ka hadlay heshiiskii burburay ee uu ugu biiri rabay Barcelona
Liibaan Fantastic August 28, 2017
(Barcelona) 28 Agoosto 2017 Laacibka Nice ee Jean Seri ayaa markii ugu horaysay ka soo muuqday saxaafada kadib markii uu burburay heshiiskii uu ku doonayay inuu ugu biiro Barcelona.
26 jirka reer Ivory Coast ayaa ku rajo waynaa in la dhameeyo ku biiridiisa Barcelona maadama ay tahay kooxdiisa riyada sida uu yiri.
Wuxuuna rajo ka muujiyay in markale heshiisku uu yahay mid furan, wuxuuna u sheegay kooxdiisa inuu ka xunyahay qaabkii ay uga hor istaageen inuu ku biiro kooxda ugu fiican aduunka sida uu aaminsanyahay.
“Waxaan dareemayaa inaan ku jiro xaalad liidata, waliba mid aad u xun, been idiinma sheegayo” ayuu u sheegay Mundo Deportivo.
“Waxaan ku jiraa xaalad xun, kubadda cagtu waxay iiga dhignayd farxad iyo raaxo, riyadaydii ahayd ku biirida Barcelona waa ay soo idlaatay taasina waxay iiga dhigantahay anfariir”.
“Inkabadan hal saac ayaan la qaatay wakiiladii ka socday Barcelona kadib kulankii Napoli ee Champions League, mana aysan ii sheegin in wadahadaladu ay burbureen, aniga oo faraxsan ayaan aaday gurigayga, maalintii ku xigtay ayaan ogaaday warkan”.
“Waan rumaysan waayay in wadahadaladu ay u burbureen isfahmi waa yimid, kadib waxaan la kulmay maamulka Nice laakiin waxba iima sheegin xitaa ma aysan fiirin indhahayga, balan qaad ayeey ii sameeyeen laakiin ma aysan fulin balantii”.
“Waxay dalbadeen lacag badan si ay ii fasaxaan aniga, waxaan rumaysanahay inay jirto fursad kale oo ah in labada kooxood ay dib ugu soo laabtaan wadahadalada si dagan, si ay u gaaraan heshiis, lacagtu ma ahan wax walba”.
“Waxaa jira kooxo waa wayn oo xiisaynaya saxiixayga sida Juventus, PSG, Liverpool, Arsenal iyo Dortmund, tusaale ahaan Roma dhawr dalab oo ay igu doonayso ayeey soo gudbisay laakiin lacag darteed ayuu u suurogali waayay heshiiskaas”.
Telefoot oo daaha ka qaaday sababta dhabta ah ee ka danbeysay in Neymar uu ka tago Barcelona
Barcelona oo soo bandhigtay Ousmane Dembele (SAWIRRO)